वजन घटाउन को लागी एक बेर आहार कसरी पछ्याउने सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
गिरावट मा, एक सबै भन्दा लोकप्रिय आहार बेर हो। पाकेको र स्वस्थ प्लमहरूको एक समृद्ध फसलले तपाईंलाई फलफूलको प्रयोग गर्न विभिन्न डाइटहरू अनुसरण गर्न अनुमति दिन्छ: छिटो, लामो, मोनो-डाइट वा मिश्रित।
बेर खाना: लाभ
बेरको खानामा तौल घटाउनु मुख्यत: आन्द्राको शक्तिशाली सफा र पाचन पथको सक्रिय कार्यको कारण हो।
प्लमहरू - फलहरू स्वादिष्ट हुन्छन्, यसको मतलब भोजनले रमाईलो गर्दछ। फलहरूले केवल तौल घटाउन, तर भिटामिन ई, ए, सी, समूह बी र माइक्रोइलेन्ट्स जस्तै जिंक, तामा, फलाम, पोटासियम, आयोडिन, इत्यादिसँग पोषण गर्दछ।
सबै बेरका प्रजातिहरू पेक्टिनमा समृद्ध हुन्छन् जसले आन्द्राको पेटेन्सी र पेरिस्टालिसिस सुधार गर्दछ। लाभकारी संरचनाको प्रभावमा, नालीले कोलेस्ट्रोलको स्तर कम गर्दछ, मेटाबोलिज्म सक्रिय हुन्छ, स्वास्थ्य र उपस्थिति सुधार हुन्छ।
वैज्ञानिकहरूको तर्क छ कि यी फलहरू, विशेष गरी यदि खलमा खान्छन् भने क्यान्सर कोषहरू बढ्नबाट रोक्छ।
बेर खानाको पहिलो संस्करण: days दिनको लागि
यसले तीन दिनको लागि प्रति दिन kg केजी ताजा प्लमहरू अँध्यारो प्रजातिहरू खाने समावेश गर्दछ। प्लमको साथ, तपाईं कम फ्याट कुटीर चीज खान सक्नुहुन्छ, कम फ्याट केफिर, खनिज पानी, हरियो चिया र सादा पानी पिउन सक्नुहुन्छ।
खाना नुनको न्यूनतम मात्राको साथ तरकारी सुप हुनुपर्दछ। रोटी कालो वा सम्पूर्ण अन्नको पिठोबाट हुन सक्दछ (प्रति दिन २०० ग्राम भन्दा बढी)। पानीमा ओट र बकवाइट अन्नल, उमालेको कुखुरा (प्रति दिन १ grams० ग्राम भन्दा बढी छैन), बिहानको खाजा वा दिउँसोको खाजाको लागि १ अण्डाहरूलाई पनि अनुमति छ।
ताजा तरकारी र जडिबुटीहरूको सेवाहरू पनि देखाइन्छ - प्रति खाना १ 150०-२०० ग्राम।
प्रतिबन्ध अन्तर्गत, मदिरा, सेतो रोटी, मासु, मासु ब्रोथ, आलु र कुनै पनि उच्च क्यालोरी भाँडो, साथै चिनी र मिठाईहरू।
पोषणको यी सिद्धान्तहरूको साथ, एउटा बेरबाट तीन दिनमा १-२ केजी बनाउन सकिन्छ। तर मुख्य कुरा यो हो कि आन्द्राको डिटोक्सिफिकेसन हुनेछ, जसले स्वास्थ्य, छालाको अवस्था, प्रदर्शन (सबै कुरा सुधार हुनेछ!) लाई आवाश्यक हुन्छ।
बेर खानाको दोस्रो संस्करण - अवधि -7-१० दिन
यस विधिको साथ, तपाईले मेनूमा कुनै पनि उत्पादनहरू निम्नको अपवाद सहित समावेश गर्न सक्नुहुन्छ:
सेतो पीठो र सेतो रोटी;
बोसोयुक्त मासु र सबै बोसोयुक्त खाद्य पदार्थहरू;
रक्सी, मीठो पेयपदार्थ;
कुनै फ्राइड भाँडा;
सुविधाजनक खाना र फास्ट फूड;
उच्च फ्याट डेअरी उत्पादनहरू।
स्लिमि pl प्लमहरू कसरी प्रयोग गर्ने
यो अवतारमा, नाली यस्तै मेनुमा हुने छैन। स्वस्थ फलबाट ताजा तयार रस प्रयोग गर्न सुझाव दिइन्छ। तपाईंले यसलाई एक कपमा पिउनु आवश्यक छ (२००-२२० मिलि) खाना खान अघि, मुख्य खाना अघि।
यस्तो खानामा दश दिन भन्दा लामो समयसम्म पालन गर्न सुरक्षित हुन्छ। यद्यपि दोस्रो विकल्प फलहरूको मौसमी उपलब्धतामा सीमित छ। डिब्बाबंद जुस, जहाँ चिनी प्राय: जोडीन्छ, उपयुक्त छैन। त्यसकारण, बाली पाक्ने बित्तिकै, यस डाइटमा जानुहोस्। यसले तपाईंलाई १०-१-5 दिनमा 6--10 केजीसम्म फाल्न अनुमति दिनेछ।
साइड इफेक्ट, contraindication
प्लम डाइटको अनुपालन, विशेष गरी यसको पहिलो दिनमा, साइड इफेक्टको साथ हुन सक्छ। तथ्य यो हो कि प्लमले आंतहरूमा रेचक प्रभाव पार्दछ। यसको शुद्धिकरण यति सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ कि तपाईं घरमा हुनु आवश्यक छ र यसलाई लामो समयको लागि छोड्नुहुन्न। यस बिन्दुलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ।
कहिलेकाँही बेर खानाको समयमा, मानिसहरूले पेटको तल्लो पेटमा दुखाइ अनुभव गर्छन्, पेटमा भारीपनको अनुभूति हुन्छ। यस अवस्थामा, तपाईंले फलफूलको अंश कम गर्नुपर्दछ वा पूरै आहारमा अवरोध पुर्‍याउनु पर्छ।
वजन कम गर्ने बेर विधि - दुबै ताजा फल र रसमा - मधुमेह, पाचन प्रणालीको पुरानो विकृति, गर्भावस्था र स्तनपानमा contraindated छ।
वजन घटाउन प्लम डाइट लागू गर्नु अघि, एक चिकित्सक र पोषण विशेषज्ञको परामर्श लिनुहोस्!
53 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,364 प्रश्नहरू।